Toetra mampiavaka sy karazana trano ekolojika | Fanavaozana maintso
Toetra mampiavaka sy karazana trano ekolojika
Ny fahombiazan'ny angovo sy ny angovo azo havaozina dia mamporisika hatrany ny trano ho maitso sy hikarakara bebe kokoa ny tontolo iainana. Ireo trano ekolojika dia ireo izay kely fanjifana angovo ary tsy dia miteraka fiatraikany amin'ny tontolo iainana, na entona entona na fako.
Fa mba hananganana trano ekolojika dia tsy maintsy fantarintsika aloha hoe inona avy ireo fitaovana sahaza azy ary iza amin'ireo no tsy miteraka fiatraikany amin'ny tontolo iainana, na amin'ny fananganana azy na amin'ny fampiasany. Ankoatr'izay, misy karazana trano ekolojika maromaro miankina amin'ny toerana nananganana azy, ny fitaovana ampiasaina, ny fandidiana tianao homena azy ireo, sns. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny trano ekolojika ve ianao?
1 Mampiavaka ny trano ekolojika
1.1 Volavola biolojika
1.2 Fanajana ny tontolo iainana
2 Karazana trano ekolojika
2.1 Trano hazo ekolojika
2.2 Trano biriky tia tontolo iainana
2.3 Trano simenitra ekolojika
3 Inona avy ireo tombony azo amin'ny trano ekolojika?
Mampiavaka ny trano ekolojika
Ny zavatra voalohany alohan'ny hahalalantsika ireo karazana sy fahasamihafana misy ao amin'ny trano ekolojika dia ho fantatsika ny toetrany sy ny fomba fiasan'izy ireo. Ny trano ekolojika dia fonenana izay manararaotra ny harena voajanahary amin'ny masoandro sy ny tany ary manaja ny tontolo iainana koa izany mandritra ny fananganana azy ary rehefa vita.
Mba hanatsarana ny loharanom-pahalalana farafaharatsiny, na amin'ny fananganana azy, na amin'ny fampiasa ampiasana azy, ny famolavolana trano ekolojika dia tokony ho be pitsiny ary mahafeno fepetra takiana, toy ny:
Trano manana famolavolana bioclimatic dia afaka manatsara ny loharano natolotry ny tontolo iainana faran'izay betsaka, toy ny ora amin'ny tara-masoandro sy ny hafanana avoakan'ny tany hanafanana ny trano ary, etsy an-danin'izany, ny onja-drivotra hanafaka sy hampangatsiahana ny trano.
Mba hanokanana ireo rindrina amin'ny fiovan'ny toetr'andro tampoka eo ivelany, ireo endrika biôlômatika ireo dia miavaka amin'ny fananana hatevin'ny insulasi lehibe kokoa noho ireo mahazatra. Amin'izany fomba izany, na ny hafanana na ny hatsiaka ivelany dia tsy afaka miditra ao anaty trano ary ny mari-pana anatiny dia azo tazomina kokoa, tsy mila fanamafisam-peo na fitaovana fanamainana.
Ny zava-misy amin'ny fitsitsiana amin'ny insulate dia efa manolotra tombony amin'ny angovo, satria ialantsika famoahana entona entona mankany amin'ny habakabaka noho ny fampiasana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra be loatra hanefana na hampangatsiahana ny trano. Amin'ity fitokanana ity dia hanampy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro isika.
Ny famolavolana bioclimatic koa dia manana orientation mety hisambotra taratra masoandro araka izay tratra. Indrindra ny atsinanana atsinanana, mazàna io no mahatsikaritra ny taratry ny masoandro. Ho fanampin'izany, ity hafanana ity dia azo tehirizina amin'ny alàlan'ny akora misy hafanana hafanana, afaka mitazona hafanana mandritra ny andro ary mamoaka azy amin'ny alina rehefa mangatsiaka kokoa.
Mba hamoahana ny onjan-drivotra izay azo idiran-drivotra sy rivotra ao an-trano dia azo apetraka tokotany anatiny ka ny rivotra dia miampita amin'ny efitrano rehetra ao an-trano.
Ny toetra iray hafa tanterahan'ny trano ekolojika dia ny fanajan'izy ireo ny tontolo iainana. Izany hoe ireo fitaovana nananganana azy ireo dia voajanahary, azo averina na voaverina ary manana dian-tongotra kely ara-tontolo iainana. Ho fanampin'izany, manandrana mampiasa fitaovana tsy mila angovo firy izahay, na amin'ny famokarana na ny fitaterana azy ireo.
Fanampiny iray izay ampianay amin'ireto fitaovana ireto dia ny fanajan'izy ireo ny tontolo iainana, fa ny fahasalaman'ny olona koa. Izany dia satria ny fitaovana fananganana trano ekolojika tsy misy zavatra simika na poizina izay mety hisy fiatraikany amin'ny fahasalamantsika ary tsy manova ny sahan'andriamby ao anaty trano, manampy amin'ny fanatratrarana tontolo iainana tsara ao anatiny.
Ny fitaovana hygroscopic, ohatra, dia mifehy ny hamandoana voajanahary, noho izany ny fonontsenanay sy ny fofonaintsika dia tsy hisy fiantraikany amin'ny hamandoana avo loatra na ambany loatra.
Karazana trano ekolojika
Miankina amin'ny fitaovana ananganana trano ekolojika misy karazany isan-karazany. Ny zava-dehibe tokony tsy hadino fa ny trano dia mitaky karazana fitaovana maro samihafa ary tena sarotra ho azy rehetra ny miaraka mamaly ireo toetra voalaza etsy ambony.
Ohatra, ny trano hazo sy biriky Azon'izy ireo atao ny mahafeno ny toetra mampiavaka azy ireo, miankina amin'ny fanajana ny tontolo iainana sy ny olona monina ao aminy ny fanamboaran'izy ireo. Na izany aza, ireo trano vita amin'ny simenitra aza mahafeno ny mason'ireo fitaovana voajanahary sy mahasalama, satria ny beton mihitsy dia misy singa poizina ao amin'ny firafiny izay sady tsy ara-tontolo iainana no mahasalama. Saingy azonao atao ny manao fandinihana ireo trano ireo hahitana hoe mety ho maintso ny trano.
Trano hazo ekolojika
Wood dia fitaovana ekolojika mitovy amin'ny fahaiza-miaina, marobe ary mitondra hafanana be ao an-tranontsika. Ny tombony lehibe ananan'ny hazo dia ny fahaizany hygroscopic ary manampy amin'ny fitazonana ny hamandoana ao an-trano amin'ny toe-piainana tonga lafatra. Tsy maintsy jerentsika izany raha ny kitay dia tsaboina amin'ny varnish, ho voahitsakitsaka ny mason-koditra ary tsy ho afaka hanao ny asany hygroscopic.
Tombony iray hafa omen'ny hazo ny trano ekolojika ny fahaizany mifehy tsara. Ny insulateur ny trano, na amin'ny hatsiaka na amin'ny hafanana, dia afaka miaro antsika amin'ny hafanana ivelany ny hazo. Amin'ny tenany dia insulator tsara izy io, fa raha ampiarahina amin'ny fitaovana sasany izay manampy amin'ny insulate kokoa aza dia hitombo ny fahombiazany.
Ny hafanana toetra mampiavaka ny hazo izy io. Izany hoe, na dia tsy azo refesina amin'ny isa aza ny hafanana entin'ny hazo any an-trano, dia marina fa ny gorodona vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo dia malefaka kokoa ary mahatonga ny diantsika, ny firafitry ny rindrina, ary manome ny fahatsapana mahazo aina kokoa. ho setrin'izany dia fitaovana velona izy io.
Ny tahotra ankapobeny amin'ny trano hazo dia ilay may afoNa izany aza, ny lalàna mifehy ny trano hazo dia henjana tokoa raha ny fametrahana ny herinaratra amin'ireo teboka mora tohina indrindra izay mety may. Ny doro trano ankehitriny dia matetika noho ny antony tsy fitandremana toy ny fatana tsy voaaro izay mazàna mandrehitra sofa, karipetra na ambainy aloha. Saingy ireo hain-trano ireo dia mety hitranga amin'ny trano isan-karazany.
Na ahoana na ahoana, raha misy afo mitranga izay misy akony amin'ny firafitry ny trano ny trano, inona no may voalohany ny sosona ivelany amin'ny hazo ary misy karbaona ity.
Io sosona io ihany, izay efa may, dia miaro azy ho fiarovana voalohany manakana ny sisa kitay tsy hirehitra haingana.
Trano biriky tia tontolo iainana
Ny trano biriky ara-tontolo iainana no fananganana faharoa, satria io no teknika be mpampiasa indrindra amin'ny tantara, aorian'ny hazo.
Alohan'ny hanombohana ny famaritana azy ireo dia tsy maintsy jerentsika izany misy karazana biriky an'arivony, ka samy hanana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Na izany aza, raha atao ankapobeny, dia milaza izahay fa ny biriky tsara indrindra mety amin'ny fananganana trano ekolojika dia ireo izay vita amin'ny tanimanga tsy nasiana fofona, satria angovo lehibe no ilaina amin'ny fitifirana, izay misy akony lehibe kokoa amin'ny tontolo iainana.
Ny biriky tsy manome tombony na tombontsoa mitovy amin'ny hazo izy ireo, satria amin'ny ankamaroan'izy ireo dia ilaina ny mampiasa insulator termal. Ho fanampin'izany, ny zoron'ny trano dia mazàna mijaly noho ny tsy fitohizan'ny insulate ary noho izany dia tsy mifehy tsara ny mari-pana any ivelany.
Momba ny hain-trano dia tsara kokoa ny fihetsiky ny biriky, satria tsy mandoro na manaparitaka ny afo. Matetika ny fananganana biriky dia mitaky, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny hatevin'ny rindrina ivelany sy ny atiny fa tsy ny rafitra hazo maivana. Noho io antony io dia mety ho kely kokoa noho ny amin'ny tranga hafa ny velaran-trano ilaina.
Ho an'ireo teboka fihaonana eo anelanelan'ny biriky, ampiasao fitaovana izay azo antoka ho an'ny fahasalamantsika ary misy fiatraikany kely indrindra amin'ny tontolo iainana.
Ny karazana fananganana biriky dia:
Rindrina biriky misy alikaola
Vato vato voajanahary
Trano simenitra ekolojika
Ity no karazana trano maintso farany izay ho hitantsika. Ny beton dia fitaovana vita amin'ny vato vita amin'ny simenitra, agregate, rano ary, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia additives hanovana ny sasany amin'ireo mampiavaka azy. Izany no mahatonga ny fanamboarana dia tsy ekolojika tanteraka, satria tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fananganana maharitra tsy misy akony amin'ny tontolo iainana.
Raha ampitahaina amin'ny biriky sy hazo, beton tsy manana fahaizana hafanana tsara izy io ary koa hygroscopic, ka tsy mifehy ny mari-pana sy ny hamandoan'ny atiny anatiny izy ireo. Ho fanampin'izay, manana dian-tongotra ekolojika somary lehibe kokoa izy, satria mila angovo be dia be amin'ny famokarana azy.
Ny vy dia iray amin'ireo fitaovana izay tsy tokony hialantsika amin'ny karazana trano ekolojika, satria tsy ekolojika mihitsy io ary tsy mankasitraka ny tontolo iainana mahasalama ao an-trano amin'ny fanovana ny sahan'andriamby voajanahary ny tontolo iainana.
Satria ny beton dia fitaovana be mpampiasa erak'izao tontolo izao, mahatonga azy io ho fitaovana mora vidy sy mora vidy ho an'ny teti-bola rehetra.
Fananganana biolojika, fananganana ekolojika, mahasalama ary mahomby
Inona avy ireo tombony azo amin'ny trano ekolojika?
Sary - Wikimedia / Lamiot
Ny tombotsoan'ny trano ekolojika dia mifototra amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fihenan'ny fiantraikan'ny tontolo iainana ary ny dian-tongotra ekolojika. Ny trano tsirairay dia noforonina tamin'ny fomba iray ka hanana lafiny maro samy hafa. Na izany aza, ny fepetra takiana lehibe tsy maintsy harahin'izy ireo hahazoana antoka fa samy manana ny asany izy rehetra dia ireto manaraka ireto:
Maritrano biolojika: mifototra amin'ny fampiasana fitaovam-pananganana maharitra sy akora simika izany. Amin'izany no hanatanterahana ny fihenan'ny fampiasana akora manta sy ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana vokarin'ny fananganana sy ny fampiasana ireo voalaza ireo.
Orientation: ny trano dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fanatsarana ny angovo angovo.
Fiarovana amin'ny masoandro: Toy ny orientation manandrana mampiasa ny angovo azo ampiasaina, dia tsy maintsy mitady fiarovana amin'ny taratry ny masoandro koa ianao.
Araraoty ny vokatra entin'ny trano fandraisam-bahiny: Tsy maintsy raisina fa hampihenana ny fampiasana angovo herinaratra, ny hafanan'ny trano dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fanafanana. Amin'izany fomba izany, ny vokatra voajanahary voajanahary dia nampiasaina hanatrarana mari-pana tsara indrindra.
Famehezana sy insulate: ny famehezana sy ny insulation dia tena ilaina mba hifehezana ny mari-pana anatiny. Noho ny insulation sy ny famehezana mety dia afaka mampihena ny fampiasana angovo elektrika ho an'ny trano isika. Ohatra, amin'ny fahavaratra dia mety hihena ny fampiasana angovo amin'ny famerana rivotra.
Tsy fahatomombanana: dia misy ifandraisany amin'ilay teo aloha. Tena ilaina ny mitady fitaovana mety hanana angovo hafanana. Ireo dia fitaovana afaka mamindra angovo tsara kokoa hampiasana angovo herinaratra.
Ny tena tanjon'ny asan'ny trano maitso dia ny hampihenana ny dian-tongan'ny karbaona sy hanatsara ny harena voajanahary ho tsara kokoa.
Raha fintinina dia azo lazaina fa ny trano ekolojika mahomby indrindra dia ireo izay namboarina tamin'ny hazo. Amin'ity fampahalalana ity dia afaka mahafantatra zavatra bebe kokoa momba ny trano ekolojika sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Toetra mampiavaka sy karazana trano ekolojika
Victor R Castañeda R dia hoy izy:
Mandrisika ahy hanohy hikaroka trano maintso ity, misaotra, Andriamanitra hitahy anao.
Valiny tamin'i Víctor R Castañeda R
Conditioner amin'ny rivotra any an-trano